China simba kudyisa pelletizing muchina vagadziri uye vatengesi Kupfuma Mashini
Iyo simbi humburumbira, inowanzo kugadzirwa nesimbi simbi kana simbi simbi pombi yakarongedzwa nesimbi yesimbi inopisa kupisa, yakanyanya-kumanikidza-yakasimba, yakasimba, inopfeka-isingagadziriswe, uye isina ngura.
(2) dhiramu: Isirinda yesimbi, inowanzo kugadzirwa nesimbi yesimbi kana simbi simbi yakasunganidzwa ine simbi yesimbi inopisa kupisa, yakamanikidza kusasimba, yakasimba, inopfeka, uye isina ngura. Iyo dhiramu uye sikuruu zvinowirirana kuti uone kupwanya, kupfava, kunyungudika, kupurasitiki, kupedza uye kuomesa kwepurasitiki, uye kuenderera uye kwakafanana kuendesa kwerabha zvinhu kune iyo yekuumba system. Kazhinji, iyo urefu hwedhiramu iri gumi nemakumi matatu neshanu paupamhi hwayo, kuti iyo plastiki inyatso shungu uye ipurasitiki semutemo.
(3) Hopper: Iyo yepazasi yeiyo hopper yakashongedzwa nechinhu chakatemwa-kugadzirisa kugadzirisa uye kudimbura kuyerera kwezvinhu. Rutivi rweiyo hopper yakagadzirirwa gomba rekuona uye chiyero chemetering.
(4) Musoro wemusoro uye chakuvhuvhu: Musoro wemuchina unoumbwa nesimbi yesimbi yemukati sleeve uye kabhoni simbi yekunze sleeve. Musoro wemuchina wakagadzirwa neforoma yekuumba. Basa remusoro wemuchina kushandura iyo inotenderera epurasitiki inyauka kuita yakafanana mitsara inofamba, inova yunifomu uye yakasimba. Tungamira muhomwe yeforoma, uye upe iyo epurasitiki iyo inodiwa yekumanikidza kumanikidza. Ipurasitiki inoiswa mupurasitiki uye yakasungwa mudhiramu, uye inoyerera ichipinda mukuumbwa kweiyo kufa kuburikidza nemutsipa weiyo kufa kuburikidza neyakaipisisa firita ndiro pane imwe nzira yekuyerera. Iyo yekufa core uye kufa sleeve inoenderana chaizvo kuti iite annular gap ine kudzikira kwechikamu chemuchinjikwa, kuti iyo plastiki inyungudike iri mune inoenderera uye gobvu tubular kupfeka inoumbwa yakatenderedza yakakomberedza waya. Kuitira kuona kuti epurasitiki inoyerera nzira mufa ine musoro uye kubvisa yakafa kona yeakaunganidzwa epurasitiki, shunt sleeve inowanzoiswa. Kuitira kubvisa kumanikidza kushanduka panguva yepurasitiki extrusion, yekumanikidza yekuenzanisa mhete inoiswa zvakare.
(5) Iyo hombe muchina dhiramu inotora kudziya kwemagetsi, uye kutonhora kwemvura kunozvidzora pachako tembiricha. Iyo sikuruu yakakomberedzwa inogona kutonhodzwa nemvura (mafuta) kudzora sikuru tembiricha. Musoro wemuchina unogadzirirwa neyakaomesesa sensor yekuyedza iyo tembiricha yekunyungudika uye kumanikidza.
Iyo mweya-yakatonhora kufa pamusoro nekushinga kucheka, granulating anobatsira muchina, uye inotenderera chipande inotyairwa ne AC mota, frequency kutendeuka kumhanya mirau; iyo yekuomesa mvura kuomesa system inoumbwa necentrifugal dehydrator, dhiramu inodedera skrini, mhepo-inopepereswa yekuchengetedza bin uye zvichingodaro.
1. Iyo imwechete-screw granulator inosanganisa kuendesa, kufudza, extrusion, mweya-watonhorera unopisa pelletizing, uye mweya-feed kutonhora kuti uone otomatiki kuenderera kushanda. Yakadaro imwechete-sikuruu granulator ine yakakwira kugadzirwa kugona;
2. Iyo imwechete-screw granulator ine yemukati kusanganisa, kufudza uye extrusion zvikamu. Zvinoenderana nesarudzo yemutengi, kupisa kwemagetsi, kupisa kwemhepo kana kupisa kwemafuta kupisa tekinoroji kunogona kushandiswa. Zvinoenderana nezvinodiwa pakudzora tembiricha, zvinodiwa netembiricha zvakare zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana zvinogadzirwa. Zvakasiyana.
3. Muvhenganisi anotora tekinoroji ye "ina-mativi einchronous kusakara-isingagadzirike imba yekuvhenganisa", ine hunyanzvi hwekuita, kushomeka kwesimba kushandiswa, kukwana kwepurasitiki uye yunifomu yakapararira;
4. Chishandiso chekudyisa chinotora tekinoroji yakasarudzika yekambani, iyo inogona kubatsira kusanganisa kwezvinhu zvakasanganiswa uye kumanikidza kupihwa kweiyo imwechete sikuruji extruder yekuvandudza mashandiro uye mhando yegranulation;
5. Ose ari maviri coni sikuru uye iyo imwechete sikuru inotyairwa ne AC frequency shanduko tekinoroji, iyo inogona kuchinjika kune akasiyana tekinoroji zvinodiwa;
6. Iko kumberi kwemusoro wemuchina kunotora hydraulic inokurumidza skrini yekuchinja chishandiso, iyo inochengetedza nguva uye kushanda uye ine zvakatipoteredza zvine hushamwari;
7. Iyo granulator inotora iyo inotenderera cutter musoro uye yakanaka-kugadzirisa tuneti yemhepo-yakatonhorera inopisa granulation;
8. Iko kutonhora kwepellets kunotora dutu kupatsanura kuendesa uye dhiramu inotonhorera kana disc vibrating skrini;
9. Iyo yemagetsi control system inotora PLC, inoonekwa interface uye frequency kutendeuka tekinoroji kuti uone yakazara-maitiro otomatiki kutonga.